INFINITE: YINTONI? ITHETHA UKUTHINI? UKUSETYENZISWA KUNYE NOKUNYE
Ngaba wakha wazibuza ukuba yintoni i infinito? Namhlanje uya kuba nethuba lokuqonda yonke into enxulumene nesi sihloko sinomdla esibe nabantu abaninzi kwiintloko zabo, ungaphoswa.
3 Kwiindawo ezahlukeneyo
3.4 Ukufundwa kwemetaphysics
Ligama ukubonisa ukuba akukho siphelo, akukho mda, kukho unaphakade kwaye izinto ezininzi zikhona kwindalo iphela ukuya kumda kaThixo. Kwabaninzi i infinito luluvo nje lokufuna ukuchaza izinto ezinde kakhulu. Kwakhona ukuchaza into engapheliyo; Eli gama lisetyenziselwe ukuchaza yonke into enxulumene nobomi obungunaphakade, ukunyamezela, okungapheliyo, okanye okungaphaya kokude kakhulu.
Kwimimandla eyahlukeneyo yesayensi ichazwa njengesalathiso kwizinto okanye ubuninzi obungenamda okanye isiphelo. Kuchasene ngokupheleleyo nemida kwaye kwimathematics kuyaphikisana nexesha elimiselweyo, lilinganiselwe; icacisiwe nge Isimboli engapheliyo apho umgca wesetyhula uvela ngaphandle kwamanqaku adibanayo (∞).
Ngokumalunga nesimboli singathi inxulunyaniswe nenyani ukuba inokuchazwa ukuba inesiqalo okanye isiphelo, ayichazwanga ukuba iqala phi kwaye iqala njani, kunye nalapho iqala khona; Inyani yile yokuba namhlanje ichaziwe kwiinkalo ezininzi kwaye ichongiwe njengesixhenxe esixokayo.
Enye yezenzululwazi esebenzise elona gama likhulu yimathematics, ethi yona kunye nesayensi yekhompyuter, i-astronomy, i-physics kunye namacandelo ahlukeneyo, ayinike igama elifanayo. Kwintsimi yenkolo uthelekiswa noThixo kunye noothixo banaphakade, abangenasithuba okanye ixesha; kodwa makhe sibone ukuba ezinye iindawo zichaza njani.
Isetyenziselwa ukuchaza eminye imisebenzi engenamida, iseti ithiyori ichaza ngamaxabiso asusela ku-infinit infinity kunye infinity. Isetyenziselwa amanani apheleleyo, agcina ucwangco kwiicones; Ngokunjalo, inani elingenasiphelo licacisiwe kumanani okuqala amanani kunye namanani angenasiphelo.
Isimboli engapheliyo yaqala ukwamkelwa xa ingcali yezibalo yesiNgesi uJohn Wallis wayifaka kwenye yemisebenzi yakhe yesayensi. Olu phawu lunokujongwa njengombhalo wezibalo kwincwadi ethi Arithmetic Infinitorum ngo-1656; Kamva yabonakaliswa ngendlela yemizobo kwaye njengoko siyazi namhlanje njengelemniscate (Umzobo onani elithe tyaba le-8) kuhlelo luka-1894, kwimisebenzi yemathematika yesazinzulu saseSwitzerland uJacob Bernoulli. (Ngo-1655-1705).
Nangona kunjalo, kukho ukukholelwa, apho uphawu luvela khona kwiimpawu ezazisetyenziswa kwinkqubo ye-alchemy, kunye nakwezinye izikhombisi zonqulo ezivela kwinkulungwane ye-17. Apho uphawu olungapheliyo lubhekisa kwinyoka ebhijelweyo emile ngo-8. ebizwa ngokuba ziiuroboros.
Ezinye iingcamango ziye zazama ukudibanisa uphawu olungapheliyo kunye neemeko zobuthixo kunye namandla angaphezu kwendalo. Injalo imeko yemozulu ebizwa ngokuba yiAnalema apho ubume bokungabikho buvela esibhakabhakeni ngaphandle kwengcaciso; abantu bayichaza ngeendlela ezahlukeneyo zovakalelo kunye neemeko ezingaphezu kwendalo.
Eyona ithiyori yakutshanje ichaphazela intsomi kunye nefilimu, edibanisa abadali bamaqhawe avenger kwaye abonisa amandla i-gauntlet engenasiphelo, ekhokelwa yindoda enamandla kunye nenobubi ebizwa ngokuba yiTanos, efuna ukuthatha umhlaba: inyani kukuba abantu abaninzi bacinga ukuba oku kulungelelaniswe ndikho ngokwenene, okudala intsomi enkulu kunye nobuxoki kwizibango.
Kule ndawo yetekhnoloji inani okanye uphawu olungapheliyo luhambelana nolwimi oluthile. Oku kuvumela ukunika ixabiso elikhethekileyo kwaye ulibize ngokungapheliyo; Ixabiso elinjalo lifunyenwe kwisiphumo, emva kokwenza imisebenzi engeyiyo esisiseko okanye engenakufezekiswa yemathematics (imigaqo eqondwa kuphela ngabaprogram).
Nangona kunjalo, xa ubuza enye yazo, bayacacisa: Yimisebenzi enobunzima kakhulu, enokusonjululwa kodwa kufanele ukuba yenziwe kuphela ziingcali zenkqubo; ukuze ziphuhliswe kuphela kwiikhompyuter, zikwatsho ukuba ukuba bezenziwe ngeelwimi ezilula, iziphumo ziphose impazamo.
Lo mmandla wonxibelelwano ngokwasemoyeni uyichaza njenge "engenasiphelo", oko kukuthi, iyinika ipropathi kunye nobuchule. Ayizamkeli izithintelo, ayinasiphene kwaye ayiqinisekiswanga, ke ukuba imiselwe umda ayinakuvuma nakuphi na ukusikelwa umda.
I-Metaphysics ichaza ukuba ukubeka imida kubude obungapheliyo kukukhanyela ubunyani bendalo iphela; ukukhanyela ukuvalelwa ngokupheleleyo. Ngale ndlela ukungahoywa komda yeyona nto iyenye kukuchaswa; Ngamanye amagama, ukwaliwa kwayo yonke imida kulingana nobunyani bokuqina ngokupheleleyo; Baqwalasele kwakhona into engenamida inokungavunywa kwaye ke yintoni equlathe yonke into engaphandle kwayo, ke ngoko ayikho.
Olu luvo lokungapheliyo lubonakaliswe yimetaphysics luqulathe ngaphezulu okanye ngaphantsi isikhombisi esineenkcukacha ezicacileyo zezo zimelwe yile ngcamango; Kubo ayisiyophawu nje kodwa yinto ekhoyo kwaye kananjalo, ababuphiki ubukho bayo kuba abanamida.
Ngokuka-Aristotle umbono ophelileyo uyabuphika ubukho obungapheliyo. Ngale ndlela xa uthetha nge imida engapheliyo kwiingcinga zika-Aristoteli, ibhekisa kumzimba ongenasiphelo ohamba ngokuchasene nobukho beplite; Nangona kunjalo, ezinye iintanda zefilosofi zibonisa ukuba amandla angenasiphelo linani elinokuhlala longezwa elinye inani ngaphandle kokufikelela kumda ogqithileyo.
Iingcali zefilosofi zikholelwa ukuba ukungapheli kukudalwa komntu, ngakumbi xa amanani aqala ukubonakala, ukuqaqanjelwa komeleza ixabiso lenani elingenasiphelo, kwaye isizathu sokuba kufunwe isizathu kwaye apho amanani anokufumaneka khona, iya kuqhubeka nokukhula nokwanda. ; ekungekho luhlobo lwenjongo okanye isisombululo.
Ukuba ulithandile eli nqaku, siyakumema ukuba ufunde elilandelayo, apho kuboniswa khona izinto ezinomdla omkhulu Iinombolo zendalo: zithini? iimpawu, kunye nokunye